Bit By Bit - Mass iskaashi - 5.5.6 talo design Final
Waxa intaa dheer in kuwan 5 mabaadi'da design guud, waxaan jeclaan lahaa in ay bixiyaan laba xabbadood oo kale oo talo. First, dareen-celin degdeg ah oo aad la kulanto marka aad u soo jeedin mashruuc iskaashi mass waa "Qofna ma ka qayb qaadan lahaa." Dabcan in laga yaabo in ay run. Dhab ahaantii, ka qaybgalka la'aan waa halista ugu weyn ee in mashaariicda iskaashiga mass ka fool. Si kastaba ha ahaatee, diidmo this inta badan soo baxdo ka fekerayo xaaladda hab qaldan. Dad badan ayaa ku bilaaban qudhooda iyo shaqeeyaan: "Waxaan ahay mashquul, Anigu ma aan samayn lahaa in. Oo, Anigu garan maayo qof in la sameeyo in. Sidaas daraaddeed, cidna samayn lahaa in. "Halkii laga bilaabo naftaada iyo shaqada soo baxay, si kastaba ha ahaatee, waa in aad bilowdo iyadoo dadka oo dhan dadka ku xiran internetka iyo shaqo ka. Haddii kaliya 1-in-a-million oo dad ah, kuwaas oo ka qayb, ka dibna aad mashruuca noqon kartaa guul. Laakiin, haddii oo kaliya 1-in-a-bilyan oo qof oo ka qayb, ka dibna aad mashruuca noqon doona guuldaraystay. Tan iyo markii aannu dareen ma fiicna kala mid-in-a-million oo ka mid ah-in-a-bilyan, waxaan u leeyihiin in ay qirtaan in ay tahay mid aad u adag tahay in la ogaado haddii mashruuc dhalin doona ka qaybgalka ku filan.
Si taas loo sii yara taaban karo ka dhigi, ha uu u Galaxy Zoo, mashruuca xiddigaha xisaabinta aadanaha hore ee cutubkan ka hadlay ku soo laabto. Bal qiyaas Kevin Schawinski iyo Chris Linton, laba cirbixiyeyaasha fadhiya baar ah ee Oxford fekerayo Galaxy Zoo. Waxay marnaba ma gaari doono sarcaadka-oo aan marnaba ku qiyaasay-in laga yaabaa Aida Berges-oo ah hooyo joogtid-at-home of 2 oo ku nool Puerto Rico-lahaa aakhirka kala saarista boqolaal falagyada toddobaadkii (Masters 2009) . Ama, ka fiirso case of David Baker, biochemist ka shaqeeya Seattle horumarinta Foldit. Waxa uu marna ku filayo in qof ka McKinney, Texas magacaabay "Boots" Scott Zaccanelli, kuwaas oo ay maalin ka shaqeeyey sidii iibsadaha ah warshad waalka ah, ku qarash gareen doonto fiidkii uu laabi borotiinada, ugu danbeyn u kacaya inuu u ah tirada 6 darajayn on Foldit, iyo in Zaccaenlli lahaa, iyada oo ciyaarta, soo gudbiyaan design ah kala duwanaansho badan oo xasiloon fibronectin in Baker oo kooxdiisa laga helay si rajo ay go'aansadeen in ay u synthesize ay shaybaarka (Hand 2010) . Dabcan, Aida Berges iyo Scott Zaccanelli waa atypical, laakiin waa u xoogga internetka: la balaayiin dad, waa caadiga ah si aad u hesho atypical ah.
Labaad, la siiyey dhib la saadaaliyey inay ka qayb-galka, lahaa, waxaan jeclahay inaan idin xusuusiyo in la abuuro mashruuc iskaashi mass noqon kartaa khatar. Waxaad maal yaabaa badan oo dadaal dhisidda nidaam in uusan qofna rabin in ay isticmaalaan. Tusaale ahaan, Edward Castronova-oo ah baadhe keentay in duurka ku of dhaqaalaha Caalamka dalwaddii, hubeysan deeq dhan $ 250,000 oo ka Foundation MacArthur ah, oo ay caawiyaan koox ka mid ah horumarinta-qaatay ku dhawaad ​​laba sano oo isku dayaya in la dhiso dunida dalwaddii gudahood oo uu qaban kari waayeen tijaabo dhaqaale. In dhamaadka, dadaalka oo dhan wuxuu ahaa mid guuldaraystay, qofna doonayay in ay isticmaalaan dunida dalwaddii Castonova ee (Baker 2008) .
Marka la eego la hubin oo ku saabsan ka qaybgalka, taas oo ay adag tahay in la baabi'iyo, Waxaan u soo jeedin in aad isku daydo in ay isticmaalaan farsamooyinka bilow-up aan baruurta (Blank 2013) : dhiso prototypes fudud oo isticmaalaya software off-the-shelf iyo arko haddii aad muujin karaan meelmar ah ka hor inta maal badan horumarinta software caadadii. In si kale loo dhigo, marka aad bilowdo baaritaanka tijaabada ah, aad mashruuca ma-iyo-waa in aan eegi doonaa sida la safeeyey sida Galaxy Zoo ama eBird. mashaariicda Kuwanu, sida ay hadda yihiin, waa natiijada dadaal sanado socday by kooxaha waaweyn. Haddii aad mashruuca ka socda in ay ku fashilmaan-iyo in uu yahay dhab ah suurtogal-ka dibna aad rabto in aad ku guul darreysato degdeg ah.